स्काइप प्रयोग गर्न - सबैभन्दा राम्रो तरिका iPad संग कल गर्न छ
यसलाई केही समय पहिले थियो iPad रूपमा दुर्लभ छैन। मिति, यो साँच्चै एउटा अचम्मको संचार उपकरण हो। धेरै मानिसहरू सोध्छन्: "म iPad साथ कल गर्न सक्नुहुन्छ?"। कि मा "तपाईं पक्कै।", सकारात्मक जवाफ प्राप्त तर सबै प्रयोगकर्ताहरूले परिणाम साथ धेरै उपकरणहरू बोक्न छ रूपमा, एक iPad कल गर्न कसरी थाहा छैन। खुसीको - तपाईं यसलाई अंदाजा - यस समारोह को लागि विशेष डिजाइन एउटा अनुप्रयोग हो। वास्तवमा, त्यहाँ एक आवेदन भन्दा पनि अधिक हो। इन्टरनेटमा iPad जडान यो चिरपरिचित स्काइप प्रयोग कलको लागि एक आदर्श उपकरण बनाउँछ। यो अनुप्रयोग व्यक्तिगत कम्प्युटरमा कार्यक्रम गर्न समारोह मा पनि त्यस्तै हो।
नयाँ आईप्याडमा स्काइप प्रयोग गर्न पहिलो चरण - यो निःशुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड छ। तपाईं एक स्काइप मा सेट खाता हुनुपर्छ, तपाईं पहिले प्रयोग एक पीसी मा खाता सिर्जना वा गर्न iPad प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खाता सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाईंको खाता सिर्जना गरेपछि तपाईं iPad मा ICQ प्रविष्ट गर्न तयार छन्। यो गर्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
- तपाईं स्काइप छैनन् भने, मुख्य स्क्रिनबाट यसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
- आफ्नो लगइन र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
- तलको "पासवर्ड" को "लगइन" फिल्ड क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं फेरि लग गर्न आवश्यक छ भने, कार्यक्रम स्काइप मा पासवर्ड बचाउँछ। अनुप्रयोगमा लग इन गरेपछि मान्छे कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। यो गर्न, तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्न र त्यसपछि आफ्नो स्काइप सम्पर्क सूचीमा थप्न आवश्यक छ।
IPad संग कल गर्न तरिकामा अध्ययन, तपाईं जान्न र कसरी स्काइप मा सम्पर्क थप्न आवश्यक छ। "+" माथिल्लो बायाँ कुनामा प्रतिमा प्रेस सम्पर्क थप्न। अर्को, शब्द "खोज" र इच्छित व्यक्तिको नाम वा इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् छुनुहोस्। अनुप्रयोगलाई व्यक्तिको खोजी हुनेछ।
बित्तिकै प्रयोगकर्ता आफ्नो सम्पर्क सूचीमा थप्न चाहन्छ मानिस देख्ने, तपाईँ उनको / उनको तर्फबाट स्पर्श गर्न आवश्यक छ। गर्नुपर्छ अनुरोध व्यक्ति पाइन्छ भनेर पक्का गर्न छविमा ध्यान। त्यसपछि तपाईँ स्क्रिनको शीर्षमा "संपर्क थप्नुहोस्" क्लिक गर्न आवश्यक छ। सदस्य आफ्नो सम्पर्क सूची तपाईं थप्नका लागि अनुरोध संग निमन्त्रणा पठाइने छ।
त्यसैले अब iPad कल कसरी। तपाईंको खाता सिर्जना भएपछि गरिएको र सम्पर्क थपियो, तपाईं अन्तमा iPad साथ कल गर्न सक्नुहुन्छ। एक कल गर्न:
- तपाईं स्काइप छैनन् भने, मुख्य स्क्रिनबाट यसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्।
- टच "सम्पर्क सूची"।
- कल गर्न चाहनुहुन्छ सम्पर्क को नाम मा क्लिक गर्नुहोस्।
- "भिडियो कल" वा "भ्वाइस कल।" छुनुहोस् कहिलेकाहीं एक व्यक्ति गर्न चाहनुहुन्छ छैन "बन्द देखाउन", यो मामला मा, भ्वाइस कल उपयोगी हुन सक्छ।
एक iPad कल गर्न कसरी निर्देशनहरू अध्ययन, एक सदस्य उहाँले स्काइप मा कुरा छ जसलाई संग व्यक्ति, मार्फत "» Ipad क्यामेरा स्विच यसको वातावरण देखाउन सक्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन।
यो गर्न, बस प्रतीक तल पङ्क्ति साथ क्यामेरा बटन थिच्नुहोस् र हेर्नुपर्छ जो एक चयन अगाडि क्यामेरा, पछिल्लो क्यामेरा वा स्क्रिनमा। को interlocutor लागि छवि चयन गरिएको क्यामेरा प्रदर्शित हुन्छ वा त्यो आधारमा।
यदि चयन गरिएको छैन, कुनै क्यामेरा, एक स्काइप अझै पनि काम गर्नेछ, तर केवल आवाज भिडियो बिना कल गरिनेछ।
को महसुल योजना टन आफैलाई कसरी जाँच गर्ने?
सिम कार्ड "बीलाईन" कसरी अनलक गर्न चाँडै
मोबाइल एउटा एम्बुलेन्स कल गर्न कसरी, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ
इन्टरनेट मार्फत मिन्स्क कल गर्न कसरी ...
यस्तो फरक तरकारी casserole
कति "स्टार वार्स" सबै र के क्रममा को टुक्रा तिनीहरूलाई हेर्न?
बेलारुस को आधुनिक अर्थव्यवस्था
रूसमा नर्सको दिन कस्तो छ?
कतार कहाँ छ? राज्य को संक्षिप्त विवरण
Workle: नयाँ इन्टरनेट-कर्मचारी को समीक्षा
रक्तपातपूर्ण मरियम - इङ्गल्याण्ड को रानी को इतिहास, साथै एक चुडैल को हरकतों ...
फिलिपीन। मौद्रिक एकाइ को इतिहास। बैंकनोट्स र मुद्रा को रूप
मानव skeletons आधार। कंकाल हड्डी
तपाईं एक उसिनेर आलु मा कति क्यालोरी सोच गर्दै हुनुहुन्छ?
बिजुली नङ फाइल फुट: आवेदन समीक्षा